Honor 8X ဖုန်းက ပေးရတဲ့ဈေးထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလား?
18 Nov 2018 . 1:25 PM
Honor ကနေ အခုနှစ်ပိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေကို ဆက်တိုက်မိတ်ဆက်လာရာကနေ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Honor 8X စမတ်ဖုန်းကို မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာ မိတ်ဆက်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခု Honor 8X စမတ်ဖုန်းကို Akhayar-Tech ပရိသတ်ကြီးအတွက် Review ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Honor 8X စမတ်ဖုန်းဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ RAM 4GB | ROM 128GB Version ကို ၃၅၉,၀၀၀ ကျပ်၊ RAM 6GB | ROM 128GB Version ကို ၃၉၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတဲ့အတွက် ငွေကျပ် ၅ သိန်းအောက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကို ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Honor 8X စမတ်ဖုန်းကို စစခြင်း ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် နောက်ဖက်က ပြောင်လက်နေတဲ့ Two Tone Design ကို အရင်ဆုံးမြင်မိမှာပါ။ အခုလိုမျိုး Two Tone ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းက ပုံမှန်စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် လက်ထဲမှာ ထင်းနေမှာဖြစ်သလို တစ်ခုစီကွဲထွက်နေတဲ့ Dual Camera ဒီဇိုင်းကလည်း ထူးခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Honor 8X ရဲ့ ဒီဇိုင်းက ပုံမှန်စမတ်ဖုန်းတွေကနေ ကွဲထွက်နေတာမျိုးကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်မှာပါ။
Display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Screen အကြီးကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Honor 8X ဖုန်းက Screen Size အနေနဲ့ 6.5″ ရှိတဲ့ Full HD+ Resolution Display ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Screen Size ကတော့ တကယ်ကို အသုံးပြုရတာ အားရစရာကောင်းနေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် 84% Screen-to-Body ကြောင့်ဖုန်းက လက်ထဲမှာ ကိုင်ရတာ အရမ်းကြီးနေမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Display ကလည်း Corning Gorilla Glass3ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ပုံမှန် အစင်းရာထင်တာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးမှာပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ HiSilicon Kirin 710 Processor ကို အသုံးပြုထားပြီး RAM 4GB ဒါမှမဟုတ် 6GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kirin 710 Processor ဆိုတာက လက်ရှိ Huawei Nova 3i လိုမျိုး စမတ်ဖုန်းမှာလည်း အသုံးပြုထားတဲ့ Processor ဖြစ်ပြီး 12nm Architecture ကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Kirin 710 Processor က သာမန်အသုံးပြုမှုတွေအတွက်ကတော့ လုံလောက်တာထက်ပိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိနေပြီးတော့ EMUI 8.2 ကြောင့်် အသုံးပြုရတာ သွက်လက်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Game တွေဆော့တဲ့နေရာမှာတော့ GPU Turbo ပါဝင်ပေမယ့် တကယ့် Flagship စမတ်ဖုန်းတွေလိုမျိုး အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Graphic Setting တွေနဲ့တော့ ဆော့ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Storage ပိုင်းအနေနဲ့ 128GB ပါဝင်တာကတော့ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး SIM Slot ၂ ခုအပြင် MicroSD Card ကိုပါ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Camera ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Honor 8X က 20MP f1.8 Primary Camera အပြင် 2MP Secondary Camera ကိုပါ နောက်ကျောဘက်မှာ ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Honor 8X ဟာ AI စနစ်ကိုပါ Camera မှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ရိုက်ကူးတဲ့ Scene ပေါ်မှုတည်ပြီး အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက်တွေအနေနဲ့ Night Mode နဲ့ 480fps Slow Motion Video တွေရိုက်ကူးနိုင်ဦးမှာပါ။ Front Selfie Camera အနေနဲ့ကတော့ 16MP f2.0 Camera ကိုပဲ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Honor 8X နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပြီးတော့ AI ကလည်း ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က AI က Color တွေ၊ Saturation တွေကို မြှင့်လိုက်တာကို မကြိုက်ရင်တော့ ပိတ်ထားတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေဦးမှာပါ။ ညဘက်တွေမှာတော့ ပုံမှန်ရိုက်ကူးတဲ့ပုံတွေမှာ အနည်းငယ်အားနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် Night Mode ကြောင့် တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့ Low Light ဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ Selfie ပိုင်းအနေနဲ့လည်း ပုံမှန်အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Honor 8X ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင် Battery Life တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိနေတာပါ။ Honor 8X ဖုန်းမှာ 3750mAh Battery ပါဝင်ပြီးတော့ 12nm Architecture ကို အခြေခံထားတဲ့ Kirin 710 Processor ကြောင့် Heavy Usage လိုမျိုးမှာဆိုရင်တောင်မှ ၁ ရက်ကတော့ ကောင်းကောင်းအသုံးခံတဲ့အပြင် ပုံမှန်သုံးတာမျိုးဆိုရင် ၁ ရက်ခွဲလောက်ကို သုံးနိုင်မှာပါ။ အားပြန်သွင်းတဲ့နေရာမှာကတော့ USB Type-C မဟုတ်ဘဲ သာမန် MicroUSB ကိုပဲ အသုံးပြုထားပြီးတော့ အားသွင်းချိန် ၂ နာရီကျော်လောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြင် Honor 8X ဟာ Gesture Navigation အသစ်တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ပုံမှန်စမတ်ဖုန်းတွေလို Home ၊ Back နဲ့ Recent Key တွေနှိပ်နေစရာမလိုဘဲ 6.5″ Display တစ်ခုလုံးကို အသုံးချနိုင်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် Honor 8X ကို အဆုံးသတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂိမ်းအရမ်းကြီးမဆော့ဘဲ ပုံမှန် Social Media နဲ့ Internet သုံးမယ့်သူတွေ၊ ဖုန်းမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုပြီး သင့်တော်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ Display နဲ့ Battery Life က တကယ်ကိုကောင်းမွန်သလိုပဲ ဖုန်းရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်း သာမန်နဲ့မတူဘဲ ကွဲထွက်နေတာက သဘောကျဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
Honor ကနေ အခုနှဈပိုငျးမှာ စမတျဖုနျးအသဈတှကေို ဆကျတိုကျမိတျဆကျလာရာကနေ အခုနောကျဆုံးအနနေဲ့ Honor 8X စမတျဖုနျးကို မွနျမာနိုငျငံစြေးကှကျမှာ မိတျဆကျရောငျးခနြပွေီဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အခု Honor 8X စမတျဖုနျးကို Akhayar-Tech ပရိသတျကွီးအတှကျ Review ပွုလုပျပေးလိုကျပါတယျ။
Honor 8X စမတျဖုနျးဟာ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံစြေးကှကျထဲမှာ စြေးနှုနျးအနနေဲ့ RAM 4GB | ROM 128GB Version ကို ၃၅၉,၀၀၀ ကပျြ၊ RAM 6GB | ROM 128GB Version ကို ၃၉၉,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခနြတေဲ့အတှကျ ငှကေပျြ ၅ သိနျးအောကျ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ စမတျဖုနျးတဈခုကို ရှာဖှနေတေဲ့သူတှအေတှကျ ကောငျးမှနျတယျလို့ ပွောနိုငျတဲ့ဖုနျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
Honor 8X စမတျဖုနျးကို စစခွငျး ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ နောကျဖကျက ပွောငျလကျနတေဲ့ Two Tone Design ကို အရငျဆုံးမွငျမိမှာပါ။ အခုလိုမြိုး Two Tone ပွုလုပျထားတဲ့ ဒီဇိုငျးက ပုံမှနျစမတျဖုနျးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ လကျထဲမှာ ထငျးနမှောဖွဈသလို တဈခုစီကှဲထှကျနတေဲ့ Dual Camera ဒီဇိုငျးကလညျး ထူးခွားနတောဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Honor 8X ရဲ့ ဒီဇိုငျးက ပုံမှနျစမတျဖုနျးတှကေနေ ကှဲထှကျနတောမြိုးကို ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ သငျ့တျောမှာပါ။
Display ပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ Screen အကွီးကို ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အကောငျးဆုံးဖွဈနမှောပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ Honor 8X ဖုနျးက Screen Size အနနေဲ့ 6.5″ ရှိတဲ့ Full HD+ Resolution Display ကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ Screen Size ကတော့ တကယျကို အသုံးပွုရတာ အားရစရာကောငျးနမှောပါ။ ဒါ့အပွငျ 84% Screen-to-Body ကွောငျ့ဖုနျးက လကျထဲမှာ ကိုငျရတာ အရမျးကွီးနမှောလညျး မဟုတျပါဘူး။ Display ကလညျး Corning Gorilla Glass3ကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ ပုံမှနျ အစငျးရာထငျတာကိုလညျး ကာကှယျပေးမှာပါ။
စှမျးဆောငျရညျပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ HiSilicon Kirin 710 Processor ကို အသုံးပွုထားပွီး RAM 4GB ဒါမှမဟုတျ 6GB ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ Kirin 710 Processor ဆိုတာက လကျရှိ Huawei Nova 3i လိုမြိုး စမတျဖုနျးမှာလညျး အသုံးပွုထားတဲ့ Processor ဖွဈပွီး 12nm Architecture ကို အခွခေံပွီး တညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ အခု Kirin 710 Processor က သာမနျအသုံးပွုမှုတှအေတှကျကတော့ လုံလောကျတာထကျပိုတဲ့ စှမျးဆောငျရညျရှိနပွေီးတော့ EMUI 8.2 ကွောငျ့ အသုံးပွုရတာ သှကျလကျနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ Game တှဆေော့တဲ့နရောမှာတော့ GPU Turbo ပါဝငျပမေယျ့ တကယျ့ Flagship စမတျဖုနျးတှလေိုမြိုး အလှနျကောငျးမှနျတဲ့ Graphic Setting တှနေဲ့တော့ ဆော့ကစားနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ Storage ပိုငျးအနနေဲ့ 128GB ပါဝငျတာကတော့ အားသာခကျြတဈခုဖွဈပွီး SIM Slot ၂ ခုအပွငျ MicroSD Card ကိုပါ ထပျမံထညျ့သှငျးနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။
Camera ပိုငျးကိုကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ Honor 8X က 20MP f1.8 Primary Camera အပွငျ 2MP Secondary Camera ကိုပါ နောကျကြောဘကျမှာ ထညျ့သှငျးပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ Honor 8X ဟာ AI စနဈကိုပါ Camera မှာထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့အတှကျ ကိုယျရိုကျကူးတဲ့ Scene ပျေါမှုတညျပွီး အလိုအလြောကျပွောငျးလဲရိုကျကူးပေးမှာဖွဈပါတယျ။ အားသာခကျြတှအေနနေဲ့ Night Mode နဲ့ 480fps Slow Motion Video တှရေိုကျကူးနိုငျဦးမှာပါ။ Front Selfie Camera အနနေဲ့ကတော့ 16MP f2.0 Camera ကိုပဲ တပျဆငျပေးထားပါတယျ။
Honor 8X နဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓါတျပုံတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျ ပေးရတဲ့စြေးနဲ့ထိုကျတနျတယျလို့ ပွောလို့ရပွီးတော့ AI ကလညျး ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျက AI က Color တှေ၊ Saturation တှကေို မွှငျ့လိုကျတာကို မကွိုကျရငျတော့ ပိတျထားတာက ပိုပွီးအဆငျပွဦေးမှာပါ။ ညဘကျတှမှောတော့ ပုံမှနျရိုကျကူးတဲ့ပုံတှမှော အနညျးငယျအားနညျးတယျဆိုပမေယျ့ Night Mode ကွောငျ့ တျောတျောလေးကို ကောငျးတဲ့ Low Light ဓါတျပုံတှကေို ရိုကျကူးနိုငျမှာပါ။ Selfie ပိုငျးအနနေဲ့လညျး ပုံမှနျအဆငျ့မှာရှိတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Honor 8X ရဲ့ အားသာခကျြတဈခုကိုပွောပါဆိုရငျ Battery Life တျောတျောကိုကောငျးတဲ့ဘကျမှာရှိနတောပါ။ Honor 8X ဖုနျးမှာ 3750mAh Battery ပါဝငျပွီးတော့ 12nm Architecture ကို အခွခေံထားတဲ့ Kirin 710 Processor ကွောငျ့ Heavy Usage လိုမြိုးမှာဆိုရငျတောငျမှ ၁ ရကျကတော့ ကောငျးကောငျးအသုံးခံတဲ့အပွငျ ပုံမှနျသုံးတာမြိုးဆိုရငျ ၁ ရကျခှဲလောကျကို သုံးနိုငျမှာပါ။ အားပွနျသှငျးတဲ့နရောမှာကတော့ USB Type-C မဟုတျဘဲ သာမနျ MicroUSB ကိုပဲ အသုံးပွုထားပွီးတော့ အားသှငျးခြိနျ ၂ နာရီကြျောလောကျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအပွငျ Honor 8X ဟာ Gesture Navigation အသဈတှကေို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ ပုံမှနျစမတျဖုနျးတှလေို Home ၊ Back နဲ့ Recent Key တှနှေိပျနစေရာမလိုဘဲ 6.5″ Display တဈခုလုံးကို အသုံးခနြိုငျတဲ့အတှကျ ဒီအခကျြကလညျး ကောငျးမှနျတဲ့အခကျြဖွဈလာပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ Honor 8X ကို အဆုံးသတျကွညျ့မယျဆိုရငျ ဂိမျးအရမျးကွီးမဆော့ဘဲ ပုံမှနျ Social Media နဲ့ Internet သုံးမယျ့သူတှေ၊ ဖုနျးမှာ ရုပျရှငျကွညျ့ရတာ ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ ပိုပွီး သငျ့တျောတဲ့ဖုနျးတဈခုလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ ကွီးမားတဲ့ Display နဲ့ Battery Life က တကယျကိုကောငျးမှနျသလိုပဲ ဖုနျးရဲ့ ဒီဇိုငျးပိုငျးကလညျး သာမနျနဲ့မတူဘဲ ကှဲထှကျနတောက သဘောကဖြို့ကောငျးနပေါတယျ။